Shazam, mukutarisa kweApple | Ndinobva mac
Shazam, mumaonero aApple
Sezvo Siri achikwanisa kuziva nziyo, zvinonyanya kuitika kuti pane imwe nguva wakarasikirwa nemukana wekuziva rwiyo nekuda kwekusanzwisisika uye kunonoka kana zvasvika pakuongorora nziyo dzaunoteerera, tisingataure, huwandu hwakawanda hwenguva hunotadza uye isu tazopedzisa kuisa Shazam.
Kuwedzera mashandiro erudzi urwu kuna Siri, kana ichiri mubatsiri asinganetsi, zvakafanana nekuyedza kugadzirisa zvishoma zvine injini yakaputsika, asi zvinoita sekunge Apple haisati yambojekeswa nezvezvavanoda kuita naSiri. Vagadziri vayo vakazviziva izvi uye vakasiya Apple kuti vagadzire Bixby, mumwe weakanakisa uye anonzwisisika vabatsiri parizvino pamusika.
Sekureva kwenhamba zhinji dzerunyerekupe, Apple inogona kuve nechinangwa chekuzivisa nhasi, kutengwa kwaShazam uye senguva dzose, mutauriri anoenderana anozoti havambozivise nezve ramangwana zvirongwa zvine Apple nezvekambani iyi. Mutengo wekutenga, unoenderana Kune runyerekupe runogona kuve gumi manhamba, Izvo hazvina kuziviswa parizvino, saka isu tichafanirwa kumirira zvinoenderana nekuvuza kuti tizive mari iyo Apple inodyara mumakambani ekunze kuyedza kugadzirisa Siri.
Zvichida, zano rekutenga Shazam haringogadzirirwe chete kugadzirisa mimhanzi yaSiri, asi Apple ichazoda kutora mukana wehungwaru hwekupedzisira hwaShazam uye sezvinei, fambisa chinzvimbo kwachinoonekwa mumhedzisiro yemimhanzi yenziyo dzainoziva, uko parizvino Spotify inogara ichionekwa munzvimbo yekutanga.
Parizvino, isu tichamirira kuti tione kuti zuva rinopfuura sei, kubvira kusvika kwaedza, muCalifornia, hatizive pasina kusimbisa uku kutenga, kana kana zvichipesana, zvese zvave runyerekupe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Shazam, mumaonero aApple